सावित्री सुवेदी यौन व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, रेड लाइट एरिया तोकिनुपर्छ - Jerung Films
सावित्री सुवेदी यौन व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, रेड लाइट एरिया तोकिनुपर्छ
केटाहरुलाई भाडामा लिन्छु : सावित्री !
चर्चित अभियन्ता सावित्री सुवेदीले नेपालमा यौन व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताएकि छन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सुवेदीले रेडलाइट एरियालाई वैधानिकता दिँदा बलात्कारका घटनामा केहि कमि आउँने बताइन् । केहि समय अघि माइतिघरमा कालो पेटिकोट लगाएर चर्चामा आएकि सुवेदिले रेड लाइट एरिया तोकिनुपर्ने बताइन् ।
बलात्कारी र अपराधी राजनीतिको संरक्षणमा रहेको उनको आरोप छ । राजधानी लगायतका ठाँउमा रहेको अवैधानिक यौनधन्दालाई व्यवस्थित पारिनुपर्ने उनको तर्क छ । समयआएपछि आफूले रेडलाइट एरियाका पक्षमा अभियान चलाउने उनले बताईन् ।
म आमा बन्नको लागि विवाह गर्दिन तर केटाहरुलाई भाडामा लिन्छु : सावित्री !
यसमा कुनै पनि महिलाले आफुले चाहेको पुरुषसँग केही रकम दिएर यौनसम्पर्क राख्ने गर्छन तर त्यो युवक त्यो बच्चाको बुवा भने हुँदैन । अहिले महिलाहरुले पनि पुरुषका लागि सन्तान जन्माउने गरेका घटनाहरु समयसमयमा चर्चामा आउँने गर्दछन् । साभार जनबोली